कसरी भर्ने आईपीओ ? नयाँ लगानीकर्तालाई महत्वपूर्ण टिप्सहरु : - Banking Khabar
कसरी भर्ने आईपीओ ? नयाँ लगानीकर्तालाई महत्वपूर्ण टिप्सहरु :
Bankingkhabar /August 29, 2021
बैंकिङ खबर । यतिबेला आईपीओ निष्कासनको लहर चलेको छ । धेरै कम्पनीको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । तपाई आईपीओमा लगानी गर्न चाहानुहुन्छ ? लगानी गर्ने चाहाना छ तर, कसरी भर्ने भन्ने सोचिरहनु भएको छ । भने, अब तपाई अपनाउनुहोस यस्तो प्रकृया ।